SATA Draịvụ Iweghachite: Olee naghachi Data si SATA HDD
Gịnị bụ SATA Draịvụ
Ọ ga-agbake data si SATA ike disks?
Olee otú naghachi faịlụ site na SATA Draịvụ?
SATA (ma ọ bụ Serial ATA) ike mbanye, a makwaara dị ka Oghere Usoro diski ike, ugbu a dochie omenala PATA (Parallel ATA) ike draịva na ghọọ ụkpụrụ uka nchekwa ngwaọrụ na PC. The Serial ATA 1.0 nkọwapụta e guzobere site Serial ATA Kọmitii nke e haziri ọtụtụ isi ike mbanye emepụta (gụnyere Intel, dabara, Dell, IBM, Seagate na Maxtor), na na 2002, Oghere Usoro ahụ ATA Committee drafted Oghere Usoro ahụ ATA 2.0 nkọwapụta, ezie na ọ dịghị SATA ngwá gatụla tọhapụrụ site na oge.
Oghere Usoro ATA eji a Oghere Usoro njikọ - a Serial ATA ụgbọ ala na agbakwunyere elekere mgbaàmà, na a ike njehie mgbazi ikike karịa na na ndị okenye na PATA ma ọ bụ EIDE ike mbanye. Nnukwu ihe dị iche bụ na ọ pụrụ ego na-akpaghị aka ziri ezi njehie bụghị naanị maka data, kamakwa iwu ya Nyefe, nke mma ndị a pụrụ ịdabere data nnyefe nke ukwuu. Oghere Usoro ahụ interface nke SATA nwere a dị mfe Ọdịdị (7 atụdo) na bụkwa ọkụ-swappable, ọ na-eweta uru nke kpu oru oma data transfer n'etiti ngwaọrụ.
E wezụga, a "esi Signal Amplified System" na-eji on SATA, nke nwere ike n'ụzọ dị irè iyo ụzụ si nkịtị n'ókè. Na ruru ya magburu onwe mkpọtụ nzacha ike, na SATA usoro bụ ike na-agba ọsọ n'okpuru a ala voltaji (0.5V) karịa Parallel ATA, nke pụtara na ọ nwere ike ịzọpụta ọzọ ike.
The kacha USB ogologo
Agbanyeghị, n'agbanyeghị otú oké gị SATA ike mbanye bụ, mere nke data ọnwụ nwere ike ime dị iche iche ihe dị ka mberede data nhichapụ, usoro, nkebi mmebi ma ọ bụ ọnwụ, virus agha, na ndị ọzọ. Mgbe ọ na-eme gị, ọ ga-agbake furu efu faịlụ site na SATA ike draịva? Maa. Mgbe ihichapụ / formatting faịlụ na SATA ike draịva, ị na-agaghị n'ezie erasing ọdịnaya, ma naanị marking akụkụ nke SATA ike mbanye ebe furu efu faịlụ na mbụ ji ide maka rewriting. Ya mere, e ezi ohere n'ihi na ị na weghachite furu efu data si SATA ike draịva na mgbake software tupu rewritting amalite. Rewritting ga-eme ka gị furu efu faịlụ unrecoverable.
Olee otú naghachi faịlụ site na SATA HDD
Nke mbụ niile, na-a SATA ike mbanye mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac.
Ma nke software bụ wezuga nchebe na ọkachamara. Ị nwere ike iji ha ka ha naghachi faịlụ gụnyere photos, videos, audio, email na dị iche iche akwụkwọ na ị na-ehichapụ, formatted ọ bụ furu efu ruru ka ihe ndị ọzọ si SATA ike draịva, nakwa dị ka ọzọ di iche iche nke ike draịva, diski mpụga, ebe nchekwa kaadị, USB draịva, MP4 Player, iPod, wdg The dum ọrụ nwere ike-emezu 3 nzọụkwụ.
Step1 Gbaa ndị SATA HDD faịlụ mgbake omume na kọmputa gị
Mgbe na-agba ọsọ Sandisk USB mgbake software, i nwere ike inwe abụọ mgbake ụdịdị dị ka ndị na n'ihi na gị nhọrọ: Ọkachamara (dị ka a na ndabara) na Standard ọnọdụ.
Ọkachamara: Nke a mgbake mode ahapụ youcheck ansawers ka ajụjụ abụọ dị mfe, na usoro ihe omume ga-eme n'aka ekpe. Ọ bụ ihe ezigbo mode ka beginners.
Standard Mode: Standard mode dị ukwuu n'ihi na ahụmahụ ọrụ. Ọ na-enye dị iche iche mgbake nhọrọ maka gị ịhọrọ site na: Lost Iweghachite, nkebi Iweghachite, Raw File mgbake na Wubàtá Iweghachite.
Ma nke mgbake ụdịdị bụ enyi na enyi na kensinammuo. Ọzọ, ka na-aga ọzọ ma na-Ọkachamara dị ka ihe atụ.
Step2 Họrọ faịlụ ụdị ị chọrọ naputa site na SATA ike draịva.
Step4 Kwado miri iṅomi ma Malite.
Step5 Preview na-agbake furu efu faịlụ site na SATA ike draịva
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si SATA Draịvụ